Redmi K20 wuxuu noqon doonaa magaca dhamaadka-sare ee Redmi | Androidsis
Waxaan ognahay toddobaadyo in Redmi wuxuu ku shaqeeyaa taleefan heer sare ah, kaas oo yeelan doona Snapdragon 855 oo ah processor. Toddobaadyadan waxaan horey u helnay daadad ku filan oo ku saabsan qalabkan. Waxaa sidoo kale jiray warar xan badan oo ku saabsan magaca uu taleefanka yeelan lahaa. In kasta oo tani ay tahay wax aan awoodnay inaan hadda ogaanno. Tan iyo markii la xaqiijiyay inay noqon doonto Redmi K20.
Tani Redmi K20 waa dhamaadka-sare ee ugu horreysa ee sumadda Shiinaha. Taariikhda sii deynta ayaa wali ah mid dahsoon, inkasta oo la qiyaasayo inay si rasmi ah u imaan karto bishan May. Marka waa inaan waxbadan ka ogaanno taleefankan toddobaadyadan soo socda.
Shiinaha xitaa waxaa jira warar sheegaya in taleefankani yahay wuxuu ku iibin karaa dalka dibadiisa magaca Pocophone F2. Laakiin waxay u muuqataa inay yihiin warar xan badan, iyadoo aan la xaqiijin. Waan arki doonaa haddii Redmi K20 ugu dambeyntii si caalami ah loogu iibin doono astaan ​​kale, inkasta oo ay warqad u muuqato mid aan dhici karin.
Redmi wuxuu nooga tagay dhowr taleefan sanadkan, gaar ahaan kuwa dhexe iyo kuwa hoose. Qaar ka mid ah taleefannada si fiican wax u iibinaya, sida Note 7, oo guul u ah suuqa. Badanaa waxaa waday iibkeeda wanaagsan ee Hindiya, suuq ay sumcadda Shiinaha si wanaagsan uga socoto.
Redmi K20 Tani waa soo gelitaankaada qayb aad u tartan badan, sida dhamaadka sare, ay xukumaan dhawr magac. Laakiin haddii ay soo bandhigaan taleefan leh qiime wanaagsan oo lacag ah, maadaama ay u muuqato inay sidaas noqon doonto. Marka waxaan la kulanay moodel siin kara waxyaabo badan oo looga hadlo qaybtan suuqan.
Xaqiiqdii waxbadan ayaan ka rajeyneynaa taleefankan. Hadda, wali waxaa la isla dhexmarayaa in Redmi K20ani imaan doono kahor dhamaadka bisha, inkasta oo aan durba dhexda ku jirno. Laakiin waxaan rajeyneynaa inay dhowaan soo baxayaan war ku saabsan imaatinkaaga. Shirkaddu waxay kaliya sheegaysaa in imaatinkeedu uu noqon doono mid aad u dhakhso badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Redmi K20: Waxay noqon doontaa magaca Redmi-dhamaadka sare